Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Meelaha Cheap Yurub waa mawduuc kulul. First of dhan, dalxiisayaasha Yurub ka arki kartaa wax kasta oo ka Dukaamada weyn in xeebaha quruxda badan. Sidaas darteed magaalooyinka sida Venice, Rome, iyo Paris malaayiin dalxiisayaal u safraan Europe sannad kasta. Waxaan ka abuuray liiska jaban…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Marka la qorshaynayo fasax ah qoyska, laba ama koox saaxiibo, waxaa inta badan way adag tahay in qof kasta u heli in ay ku heshiiyaan. Mid ka mid ah wax ay noqon doontaa fudud si ay u heshiiyaan, si kastaba ha ahaatee, waa in aad kiraysato baabuur ama tag tareen. Here’s why train tripping is…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Gadashada tigidhada tareenka Yurub had iyo jeer waa xiiso leh. First of dhan, at Save A Tareenku waxa aanu had iyo jeer raadinaya tigidhada tareenka qiime jaban kuu. We have explored topics like nice hotels and beautiful train journeys. Laakiin mawduuca ugu kulul in industry tareenka waa…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Waa maxay sababta qiimaha kortaan UK tareenka si sare? Qiimaha kortaan UK tareenka ayaa kor u kacay in ay sare. Europe waxaa loo arkaa in ay leeyihiin sodcaalladoodii tareenka ugu fiican adduunka. sodcaalladoodii oo tareen bii'adda ee Europe ku jira muuqaal qurux badan. rakaabka tareenka meel kasta helaan tuulooyinka fog fog si ay…